”छरिँदा भन्दा एक हुँदा नै कम्युनिष्टका बिरुद्ध लड्न काँग्रेसलाई सजिलो हुन्छ – जीतजंग बस्नेत - Khapung.com
”छरिँदा भन्दा एक हुँदा नै कम्युनिष्टका बिरुद्ध लड्न काँग्रेसलाई सजिलो हुन्छ – जीतजंग बस्नेत
१३ आश्विन २०७७, मंगलवार १९:४७ 263 पटक हेरिएको
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल तरुणदलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतसंग गरेको बिशेष कुराकानी
हामीले नगरकोटमा जिल्ला अध्यक्षहरुको सभा र प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ । प्रदेश, जिल्ला र वडास्तरमा लगभग ७५ प्रतिशत प्रशिक्षण कार्यक्रम हामीले सकेका छौँ । यो भनेको संगठन विस्तारको रणनीति हो । यसबाट हामीलाई उर्जा पनि प्राप्त भएको छ । संगठनलाई सुदृढीकरण गर्न यसले मद्धत पुगेको छ । अन्य पार्टीका भातृसंगठनले केही नगरिरहेको सन्दर्भमा तरुणदल भने वडा वडामा, गाउँगाउँमा गएका छौँ । केपी ओली सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयका विरुद्ध तरुणदल पहिलो पटक सडकमा उत्रिएको छ । चर्को मूल्यवृद्धिका विरुद्धमा कडा रुपमा हामी उत्रिएका छौँ । आगामी दिनमा सडक नेपाल तरुण दलको कब्जामा हुन्छ ।
तपाईले प्रशिक्षणका क्रममा गाउँ गाउँ पुग्यौँ भन्नु भयो । त्यहाँ गएपछि प्रतिक्रिया के पाउनु भयो त ?
तरुण दलको प्रमुख एजेण्डा भनेको आफु बलियो हुने हो । संगठनको कुराहरु आम कार्यकर्ताहरुलाई थाहा हुनुपर्यो । केन्द्र कसरी अगाडी बढ्दैछ ? जिल्ला कसरी अगाडी बढ्दैछ ? भन्ने कुरा थाहा दिनलाई हामीले त्यो गरेका हौँ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस र तरुण दलको बारेमा बुझाउनु पनि हो । हामी कांग्रेसका भातृ संगठन मात्र नभई साथी संगठन पनि हौँ । तर पार्टीको विचार, एजेण्डाहरु हामीले तल्लो स्तरका जनतासम्म पुर्याउन सकेनौँ ।
हामीले दुई पटक संविधान बनायौँ । त्यो कुरा जनतालाई भन्न सकेनौँ । विदेशी शक्तिको दवाबको बावजुत सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान बनायो । यस्तै शेर बहादुर देउवाले त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आफू हार्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि तीनै चरणका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । मधेशमा आन्दोलन चर्किरहँदा पनि शान्तिपूर्वक ती कामहरु गरिए । यी कुराहरु हामीले राख्न सकेनौँ । अब आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण एजेण्डाहरु जनतामा लैजाने दायित्व हामी निर्वाह गर्छौँ । प्रशिक्षणबाट पनि नेताहरु एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ र यसका लागि हामी पार्टीलाई आवश्यक सहयोग गर्छौँ । तरुण दलका अन्य एजेण्डा त छँदैछन् ।
नेपाली कांग्रेसलाई आम जनतामा जोड्नका लागि तरुण दलको अबको भूमिका के हुन्छ ?
पहिलो कुरा त हामी आफु बलियो हुनुपर्यो । पहिले आफुमा भएका विकृति विसंगती हटाउनु पर्यो । जुन युवा संगठनमा विकृति विसंगति देखिएका छन्, ती हट्नुपर्यो । त्यसका लागि नेपाल तरुण दल प्रयास गरिरहेको छ र हटिसकेको पनि छ । पार्टी भन्दा बाहिर रहेका जसले राजनीतिमा विश्वास गर्छन् तिनीहरुलाई आकर्षित गर्नलाई हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ । त्यो भनेको के हो भने आम नेपाली जनताको भावना बुझ्ने काम गर्न तरुण दलले सक्नुपर्यो । समाजमा देखिएको विकृति, विसंगति हटाउन कोशिस गर्दै अन्याय र अत्याचार तथा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्यो । यसका लागि तरुण दल आवश्यक कदम चाल्छ । जनताका हक र अधिकारका लागि हामी सँधै लडिरहने छौँ ।
सरकारका गतिविधिलाई कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ तरुण दलले ?
निर्वाचनका बेलामा आम जनताले एमाले र माओवादीभन्दा पनि केपी ओलीलाई हेरेर मत दिएको हो । उहाँले राष्ट्रवादी कुरा गर्नुभयो । त्यो हामीलाई खोक्रो लाग्यो होला, हामीले उखान टुक्का भन्यौँ, तर जनताले राम्रो मानेर मत दिए होलान् । भोलिका दिनमा त्यो खोक्रो हो कि सही हो त्यो थाहा भइहाल्छ । उहाँसंंग अब स्पष्ट बहुमत छ । देश बनाउनकै लागि जनताले दुई तिहाई मत दिएका हुन् । तर केही कुराहरुमा उहाँ अझैँ पनि अधिकार खोजिरहनु भएको छ । जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान लगायतका निकायलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउनु भएको छ । यो राम्रो कुरा होइन ।
यदि उहाँ साच्चि नै प्रजातान्त्रिक हुनुहुन्थ्यो भने यी निकायलाई स्वतन्त्र बनाउनु हुन्थ्यो । तर उहाँले विपक्षीलाई प्रहार गर्नका लागि यी कुराहरु गर्नुभएको छ । जुन कुरा न्यायालयमाथि भएको हमलाले देखाइसकेको छ । संवैधानिक बाटोबाट नगई एउटा सचिवले चिठी लेखेर उमेरको हदबन्दी भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई बर्खास्त गरिदियो । त्यस्तै प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने तर एउटा मन्त्रीसंग प्रश्न सोध्दैमा कार्यक्रम नै बन्द गराई दिनेसम्मका कामहरु भएका छन् । यसमा अन्य प्रेसहरु पनि चुप लागिरहँदा तरुण दलले त्यसको विरोध गर्यो । दुई तिहाई मत छ भन्दैमा संविधानलाई मिचेर विपक्षी र जनतामाथि थिचोमिचो गर्न पाईँदैन । सरकारका यस्ता नकारात्मक कदमका विरुद्ध हामी सडकमा उत्रिन्छौँ ।
यसअघि पनि तपाईहरुले विरोधका कार्यक्रम गर्नु भएकै हो । अब कसरी सडकमा उत्रिनु हुन्छ ?
हामी प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिरहेकै बेलामा पनि पुलिस प्रशासनले हाम्रा साथीहरुमाथि धरकपट गरिरहेको छ । तर हामी बन्दुकदेखि डराउन्नौँ । हिजो पनि राणाले बन्दुक नै निकालेको हो । राजाले पनि बन्दुक नै निकालेको हो । यस्तै माओवादीले पनि बन्दुक निकालेर हामीलाई हानेका हुन् । तर आखिर बन्दुकको आडले लेडेकाहरुले घुँडा त टेक्नु पर्यो नि । कांग्रेसभित्र झगडा छ, जनताले मत दिएका छैनन् भनेर पेलेर जानुपर्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्रै हो ।
सानो छँदा यति रुपैया तोला सुन थियो भनेर हावादारी कुरा गर्न मिल्दैन । अन्तराष्ट्रिय बजारमा यस्तो भएकाले मूल्य वृद्धि भएको हो भनेर स्पष्ट कुरा गर्न सक्नु पर्यो नि । तर हिजोका दिनमा मूल्यवृद्धि हुँदा कराउने अहिले आफू आउँदा हावादारी कुरा गर्न सुहाउँदैन । यसको विरुद्धमा तरुण व्यापक विरोध गर्छ । अब सडक हाम्रो हो । जे गर्नु पर्छ सडकमा नै गएर गर्ने हो । सरकारले गरेका नकारात्मक क्रियाकलापका विरुद्धमा सडक तताउने काम गरिन्छ ।
यसका लागि त तपाईहरुको संगठनभित्र पनि एकता हुनुपर्यो । तरुण दल आफै पूर्ण कहिले हुन्छ ?
यो एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । केन्द्रमा हामी चार जना छौँ । अध्यक्ष भएर संगठन पूर्ण नभएकोमा म आफै जिम्मेवारी लिन्छु । जिल्ला, नगर सबै क्षेत्रमा हाम्रा कमिटीहरु पूर्ण छन् । त्यही भएर नै हामीले प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेका हौँ । केन्द्रको निर्देशनको भूमिका भएकाले हामीले नीति निर्माण गरेर त्यसको आवश्यक निर्देशन दिने हो । केन्द्रीय सदस्यमा आउन चाहने साथीहरुलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु । तत्कालिन राजनीतिक कारणले त्यो हुन सकेको छैन । तर सडकमा जान यसले रोक्दैन ।
भनेपछि यसले पूर्णता चाँडै पाउँछ ?
यसले महासमिति अगाडि नै पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । मैँले आज भोलि नै भए पनि हुन्छ भनिरहेको छु । कुरा तपाईहरुलाई थाहा नै छ । तर म आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेको छैन ।
अन्त्यमा, दुई कम्युनिस्टहरु एक भएका छन् । यसलाई तरुण दलले कसरी हेरेको छ ?
म त केपी ओली र प्रचण्ड दुबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु । दुईवटा पार्टी एक गर्नुभएको छ । अब जंगलमा रहेको कम्युनिस्टहरु र सदनमा रहेका साना कम्युनिस्टलाई पनि एक गर्नुस् भनेर शुभकामना दिन्छु । त्यो भयो भने यिनीहरुले देशमा कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउँछन् र नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । र त्यसपछि नेपालमा कम्यनिस्टहरु रहँदैनन् । किनकी हामीले थुप्रै म नै हुँ भन्नेलाई पनि पाखा लगाइसकेका छौँ । यिनीहरु छरिएर रहेमा के हुने भयो भने कम्युनिष्टहरुसंग जहिले पनि लडाई हुने भयो । अर्को पुस्ताले कम्युनिस्टसंग लडिरहनुपर्ने भयो । त्यो भएर नेपाली कांग्रेसले पनि एकता बनाउन पहल गर्नु पर्ने हुन्छ र कम्युनिस्टहरुसंगको लडाई हामी जित्ने छौँ ।
असार १५ गते कर्णालीमा
‘चाडपर्व राष्ट्रका अमूल्य
आइसोलेसनमा रहेका छोराले बाबुको
जात्रा मनाउन दुई दिन
सम्बन्ध विच्छेद र जबर्जस्ती
अझै ल्याउन सकेनन् सिरहाका
पर्सामा कोरोना संक्रमणबाट ३
मगर समुदायको अन्त्यन्तै लोपन्मुख जिवैमामा गिती नाटक प्रर्दशन
कोरोनाबाट मृत्यु भएका नेपालीको १३ दिनपछि अन्त्येष्टि
पीए नेपालको असाहाय बालबालिका, बृद्धबृद्धालाई खुवाउने अभियानमा हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको साथ
दशैको लागि खशी किन्दा बाख्री परेपछी ठाउँ को ठाउँ बेहोस् Comedy Dashain 2075 Ft Bhatbhate Maila
साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने
असार १५ गते कर्णालीमा सार्वजनिक बिदा
‘चाडपर्व राष्ट्रका अमूल्य निधि हुुन’
प्रमुख संरक्षक: लक्ष्मी खापुङ (हङकङ)
संरक्षकहरु: राजेन्द्र खापुङ (मलेसिया), पुष्प खापुङ: (दक्षिण कोरिया)
सम्पादक: देवेन्द्र खापुङ